तपाईको कम्पनी अनुसार तपाईको सेल फोन कसरी रिचार्ज गर्ने
हामी यस्तो संसारमा बस्छौं जहाँ सञ्चार आवश्यक भएको छ, त्यसैले हामी सधैँ कम्प्युटर, ट्याब्लेट र विशेष गरी मोबाइल फोनहरू मार्फत जडान रहन्छौं।
धेरै व्यक्तिहरू फ्ल्याट प्रिपेड इन्टरनेट दर भाडामा लिन रुचाउँछन्, अरूले समय-समयमा साना किस्ताहरूमा आफ्नो ब्यालेन्स नियन्त्रण गर्छन्, कुनै पनि अवस्थामा, रिचार्जिङ अझै पनि सबैका लागि आवश्यक प्रक्रिया हो।
सञ्चार कम्पनीहरूले तपाईंलाई मोबाइल रिचार्ज गर्न विभिन्न तरिकाहरू प्रस्ताव गर्छन्, तपाईंले आफ्नो मोबाइल ब्यालेन्स अनलाइन रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ, कल मार्फत वा व्यक्तिगत रूपमा अधिकृत एजेन्टहरू गएर।
हामी तपाईलाई स्पेन भित्र र बाहिर मुख्य कम्पनीहरु को फोन रिचार्ज बारे सबै कुरा बताउँछौं।
टप अप मोबाइल अनलाइन
हाल, इन्टरनेट पहुँच भएको कम्प्युटरको मद्दतले तपाईंको घरको आरामबाट वा काममा तपाईंको मोबाइल ब्यालेन्स रिचार्ज गर्न सम्भव छ।
धेरै संचार कम्पनीहरूले तपाइँलाई यस तरिकाले तपाइँको मोबाइल रिचार्ज व्यवस्थापन गर्न अनुमति दिन्छ, स्पेनमा मात्र होइन, तर विश्वको जुनसुकै ठाउँमा मात्र सेकेन्डमा।
मोबाइल अनलाइन रिचार्ज गर्ने कार्यहरू धेरै सजिलो छन्, केवल मोबाइल अपरेटरको वेबसाइटमा नेभिगेट गर्नुहोस्, फोन नम्बर र रिचार्ज गर्न ब्यालेन्स लेख्नुहोस्।
यस प्रणालीको साथ, तपाईंसँग धेरै समय बचत गर्ने फाइदा छ जुन तपाईं थप महत्त्वपूर्ण मामिलाहरूमा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट पनि आफ्नो ब्यालेन्स टप अप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंसँग नेटवर्क पहुँच भएको एउटा कम्प्युटर मात्र हुनुपर्छ। सामान्यतया, एप नि:शुल्क छ र आईओएस (एप स्टोरमा) र एन्ड्रोइड (गुगल प्लेमा) को लागि उपलब्ध छ, यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस् र तपाईंले चाहेको बेला आफ्नो फोन रिचार्ज गर्नुहोस्।
मोबाइल ब्यालेन्स पाउनुहोस्
यद्यपि शीर्ष अप गर्ने सबैभन्दा सजिलो तरिका अनलाइन हो, त्यहाँ क्रेडिट किन्नको लागि परम्परागत प्रणालीहरू पनि छन्। यसलाई रिचार्ज गर्न सकिन्छ:
एक फोन कल
पाठ सन्देश (एसएमएस)
अधिकृत स्टोर र केन्द्रहरू
स्वचालित रिचार्ज सेवा
यद्यपि, केही अपरेटरहरू प्रक्रियामा अलिकति भिन्न हुन्छन्, तिनीहरू सबै आफ्नो उद्देश्यमा एकरूप हुन्छन्: ब्यालेन्स रिचार्ज गर्न।
अर्को, हामी तपाईलाई एउटा सूची छोड्छौं ताकि तपाईले स्पेनका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण टेलिफोन अपरेटरहरूमा मोबाइल रिचार्ज गर्ने प्रक्रिया विस्तारमा सिक्न सक्नुहुन्छ:
Oi ब्राजिल कसरी रिचार्ज गर्ने
एक्सप्रेस टिभी पुन: लोड गर्नुहोस्
टप अप Paysafecard
पोस्टपे प्रिपेड कार्ड टप अप गर्नुहोस्
Iliad कसरी रिचार्ज गर्ने
प्रिपेड टेलिकम रिचार्ज
SFR रिचार्ज गर्नुहोस्
संस्कृति नुरी कार्ड रिचार्ज
CallYa लोड गर्दै
मोबाइल ब्यालेन्स जाँच गर्नुहोस् हामी यसलाई चरण-दर-चरण कसरी गर्ने भनेर बताउँछौं!
Claro अर्जेन्टिना रिचार्ज गर्नुहोस्
Jazzpanda मोबाइल टप अप
डिजिटल मोबाइल रिचार्ज गर्नुहोस्
Cubacel को साथ मोबाइल टप अप गर्नुहोस्
Pepephone मोबाइल रिचार्ज गर्नुहोस्
República Móvil मा कसरी रिचार्ज गर्ने?
प्रिपेड मोबाइल फोन MásMóvil रिचार्ज गर्नुहोस्। दरहरू
तपाईको बैंकबाट मोबाइल टप अप गर्नुहोस्
थोरैलाई थाहा भएता पनि बैंकहरूले सुरक्षित रूपमा मोबाइल ब्यालेन्स रिचार्ज गर्ने सेवा पनि दिन्छन्। सत्य यो हो कि धेरै भन्दा धेरै संस्थाहरू सामेल भइरहेका छन् जसले आफ्ना ग्राहकहरूलाई यी भुक्तानी कार्यहरू सहज बनाउँछन्। यो सेवा एटीएम, बैंक अफिस वा बैंकको प्लेटफर्म वेबसाइटबाट उपलब्ध गराइन्छ ताकि तपाईंले घर छोड्नु पर्दैन।
स्पेनका परम्परागत बैंकहरूले केही समयदेखि यो सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्। यद्यपि, अन्य युवा बैंकहरूले यो प्रविधिलाई आफ्नो प्रणालीमा समावेश गरेका छैनन्। तपाईंको मोबाइल ब्यालेन्स रिचार्ज गर्न सबैभन्दा सुरक्षित बैंकहरू तल हेरौं।
अधिकांश बैंकहरूले मोबाइल बैंकिङ सेवा पनि प्रदान गर्छन्। यसको साथ, तपाईं जहाँ भए पनि आफ्नो सेल फोनको आरामबाट आफ्नो ब्यालेन्स रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्यतया, यस मोडालिटी अन्तर्गत रिचार्ज गर्न सकिने मोबाइल अपरेटरहरूको सूची एकदम व्यापक छ, जसले गर्दा कोही पनि छुटेको छैन।
हाइप प्रिपेड कार्ड टप अप गर्नुहोस्
PCS पुन: भर्नुहोस्
टप अप Aldi कुराकानी
कार्डको साथ मोबाइल टप अप गर्नुहोस्
BBVA मोबाइल रिचार्ज गर्नुहोस्
Santander मोबाइल रिचार्ज गर्नुहोस्
ING बाट मोबाइल टप अप गर्नुहोस्
La Caixa मोबाइल रिचार्ज गर्नुहोस्
स्पेन बाहिर मोबाइल रिचार्ज गर्नुहोस्
अब स्पेन बाहिर मोबाइल फोन रिचार्ज धेरै सजिलो छ। स्पेन बाहिर यात्रा गर्दा तपाईं कुनै पनि समस्या बिना परिवार र साथीहरूसँग कुराकानी जारी राख्न सक्नुहुन्छ। आज, बजारमा विभिन्न टेलिफोन अपरेटरहरू छन् जसले यो सेवा कुशलतापूर्वक प्रदान गर्दछ।
साथै, यदि तपाईंसँग अन्य देशहरूमा साथीहरू र परिवार छन् भने, तपाईंले तिनीहरूलाई यूरोमा भुक्तानी गरेर ब्यालेन्स पठाउन सक्नुहुन्छ। विदेशमा आफ्नो मोबाइल रिचार्ज गर्ने उत्तम तरिका वेब मार्फत, आफ्नो कम्प्युटर प्रयोग गरेर वा आफ्नो मोबाइल फोनमा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु हो।
त्यहाँ पनि आमनेसामने ठाउँहरू छन् जसले तपाईंलाई अन्य देशहरूमा मोबाइलहरूमा क्रेडिट तिर्न अनुमति दिन्छ। सेवा अवस्थित ठाउँ वा प्रतिष्ठानहरू हुन्: कल सेन्टरहरू, किओस्कहरू, स्व-सेवा वा पसलहरू।
हामीलाई थाहा छ कि तपाईंका प्रियजनहरूबाट टाढा रहन गाह्रो हुन सक्छ, तर दूरसञ्चारको जादूको लागि धन्यवाद तपाईं तिनीहरूसँग धेरै नजिक महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामी तपाईंलाई आफ्ना प्रियजनहरूसँग सम्पर्कमा रहन धेरै विकल्पहरू देखाउँछौं।
पेरुबाट मोबाइल रिचार्ज गर्नुहोस्
चिलीबाट मोबाइल रिचार्ज गर्नुहोस्
मेक्सिकोमा मोबाइल टप अप गर्नुहोस्
भेनेजुएलामा आफ्नो मोबाइल रिचार्ज गर्नुहोस्
इक्वेडरमा सेल फोन रिचार्ज गर्नुहोस्
बोलिभियाबाट मोबाइल टप अप गर्नुहोस्
कोलम्बियामा मोबाइल टप अप गर्नुहोस्
Rebtel सेल फोन कमिशन बिना रिचार्ज
Telcel मोबाइल सजिलै र छिटो रिचार्ज गर्नुहोस्
Suop मोबाइल सजिलै र छिटो रिचार्ज गर्नुहोस्
सोरियाना मोबाइल रिचार्ज गर्नुहोस्
टप अप मोबाइल Movilnet
डोमिनिकन रिपब्लिकबाट मोबाइल टप अप गर्नुहोस्
क्युबामा मोबाइल टप अप गर्नुहोस्
मोबाइल रिचार्ज गर्ने अन्य विभिन्न तरिकाहरू
तपाईको मोबाइल फोनको ब्यालेन्स हरेक दिन रिचार्ज गर्ने विकल्पहरू धेरै छन्। टेलिफोन अपरेटरहरूले तपाईंलाई नेटवर्कमा पहुँच नभएको बेला मोबाइल रिचार्ज गर्ने विभिन्न तरिकाहरू प्रस्ताव गर्छन्। उदाहरणका लागि, विभिन्न टेलिफोन अपरेटरहरू वा तपाईंले प्रिपेड कार्डहरू किन्न सक्ने स्टोरहरूका लागि रिचार्ज सेवा प्रस्ताव गर्ने अधिकृत एजेन्टहरू।
यी प्रिपेड कार्डहरू विभिन्न रकमहरूसँग आउँछन् जसले तपाईंलाई आफ्नो मोबाइल लाइन प्रविष्ट गर्न चाहेको रकम छनोट गर्न दिन्छ। तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सरल छ, केवल सक्रियता कोड खोज्नुहोस् र पछाडिको रिचार्ज निर्देशनहरू।
रिचार्ज गर्नुहोस् वा प्रिपेड कार्ड खरिद गर्नुहोस्: किओस्क, हुलाक वा व्यावसायिक कार्यालयहरू, विशेष स्टोरहरू, ग्यास स्टेशनहरू, सुपरमार्केटहरू, सुपरमार्केटहरू, ट्राभल एजेन्सीहरू, कल सेन्टरहरू, आदि।
असीमित मोबाइल इन्टरनेट
त्यहाँ दरहरू छन् जसले तिनीहरूका प्रयोगकर्ताहरूलाई अनुमति दिन्छ ब्राउज गर्नुहोस् र असीमित डाउनलोड गर्नुहोस्। बजारमा त्यहाँ अपरेटरहरू छन् जसले असीमित गीगाबाइटहरू वा डाटाको ठूलो मात्राको साथ प्रस्ताव गर्दछ, धेरै जसो अवस्थामा समान ब्राउजिङ गति कायम राख्छ।
सामान्यतया, यी प्रकारका दरहरू प्याकेजहरू भित्र अनुबंध गर्न सकिन्छ। स्पेनमा असीमित वा असीमित नेभिगेसन प्रस्ताव गर्ने केही कम्पनीहरू हुन्: भोडाफोन र योइगो। सबै भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि तपाईले तिनीहरूलाई युरोपियन युनियनका बाँकी देशहरूमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यहाँ पनि अपरेटरहरू छन्, यद्यपि तिनीहरूको दरहरू असीमित छैनन्, धेरै संख्यामा छन् लगभग असीमित गिगहरू सबै महिना शान्त रूपमा नेभिगेट गर्न। ती कम्पनीहरु मध्ये निम्न हुन्: Movistar, Orange, Simyo, Lowi, MásMóvil र República Móvil.
उपलब्ध दरहरू बीचको मूल्यहरू टेलिफोन कम्पनीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार फरक पर्नेछ। यी दायरा सीमित देखि लगभग असीमित ब्राउजिङ सम्म 50 जीबी। इन्टरनेट को गहन प्रयोग गर्ने ती प्रयोगकर्ताहरु को लागी एक समाधान।
टप अप मोबाइल २०२१ - कसरी तपाइँको सेल फोन चरण-दर-चरण रिचार्ज गर्ने